I-Kutir 1-Beach Cottage Near Mangalore Udupi Highway
Yermal, Karnataka, i-India
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Vinaya
Ukubaleka okunethezekile nje iminithi elingu-1 ukusuka ogwini. Ziphumulele, phumula futhi uvumele izinzwa zakho zilawule. Qeda isithukuthezi se-WFH, thola ushintsho endaweni. Uxhumo lwe-wifi luqinile, ukuze umsebenzi wakho ungaphazamiseki.
Indlu enamathayela ezungezwe izihlahla zikakhukhunathi ingeza ku-ambience ikunikeza okuhlangenwe nakho okucebisayo kwesiko le-tuluas. Sihlinzeka ngokudla kwasekhaya okwenziwe ekhaya futhi(ngesisekelo sokukhokha) ukuze i-taste buds yakho zithole ubumnandi be-costal cuisine eyaziwa ngayo.
Unovulandi, lapho kungaba nomoya opholile ikakhulukazi kusihlwa. Igumbi elingaphambili linombhede owengeziwe, izihlalo ezilula lapho ungakhululeka khona ufunde incwadi noma uphumule. Ikamelo lokulala linegumbi lokugezela elinamathiselwe futhi linekhona lapho ongasebenza khona. Sinikeze neketela futhi. Uma udinga noma yini enye sizojabula kakhulu ukukucabangela.
4.70(23 okushiwo abanye)
Ulwandle luqhele ngomzuzu nje. Umgwaqo onguthelawayeka ungama-900mt ukusuka endlini lapho ungathola khona ukudla okuyisisekelo nezithelo. Kukhona indawo yokudlela eqhele ngomzuzu ongu-1 lapho ungathola khona ukudla okuhle.
Ngiqhubeka nokuhamba kungenzeka ngingatholakali ngokomzimba ngaso sonke isikhathi. Kodwa ngiyatholakala kuzo zombili izingcingo naku-Whats App. Ngijabule kakhulu ukukuqondisa ohlelweni lwakho lweholide, izindawo ezinhle kakhulu zokudla nokuhlola, ukuze ukwazi ukulisebenzisa ngokugcwele iholide.
Ngiqhubeka nokuhamba kungenzeka ngingatholakali ngokomzimba ngaso sonke isikhathi. Kodwa ngiyatholakala kuzo zombili izingcingo naku-Whats App. Ngijabule kakhulu ukukuqondisa ohlel…